NextMapping | Banyere: Philanthropy
Na NextMapping ™ anyị na-elepụ anya n’ọdịnihu - ọdịnihu kasịnụ gbasara ụmụaka anyị. Anyị ji ịnụ ọkụ n'obi kwenye na ịnye ụmụaka ikike nke 'iduga' ọ bụghị naanị ga - enyere ha aka ịnagide ihe ịma aka ndị a ugbu a kamakwa ọ ga - eme ka ọdịnihu nke ebe ọrụ ka ebe ka mma yana ụwa.
Anyị kere Canmụaka Nwere Ike Iduzi dịka otu n'ime ụzọ anyị si enyeghachi - anyị na-eme mmemme kwa afọ maka ụmụaka ma anyị na-arụ ọrụ na-atọ ụtọ nke ịmepụta weebụsaịtị wepụtara iji nyere ụmụaka aka ịmụta nka ndị isi.
Ọhụụ anyị: Mepụta ọdịnihu ka mma site na ịkwadebe ndị isi ọdịnihu anyị… ụmụaka!
Ihe kacha enye anyi obi uto bu ihe o metutara umuaka n'uwa niile, anyi ga-enyekwa ndi oru ebere nke lebara umuaka anya.
Reg & Cheryl Cran, Ndị nrụpụta
Otu esi arụ ọrụ: 4 C maka ụmụaka nwere ike iduzi
Anyị na-ekepụta obere ụmụaka nwere ike bute ụzọ ụmụaka na ndị nne na nna ha ma ọ bụ ndị nkuzi ga-esi nweta ikike iduzi maka ụmụaka. Anyi na ndi otu umuaka ndi nwere otu uche na-aru oru iji nyere umu aka aka ka ha buru ndi ochichi n’abia n’iru.
A tụkwasara obi obi ike na onwe onye nke oma, anyi na enyere ndi umuaka aka iguzobe ntukwasi obi ha na enyere ha aka ime ezigbo mkpebi na idozi nsogbu.
Anyị na-akuzi na inwe obi ike yiri 'oke ike' inwe ikike ikwupụta onwe ha, ịkwụsi ike n'akụkụ onwe ha na otu ha ga-esi kwado ihe dị mma.
Anyị na-enyere ụmụaka aka ịghọta mkpa asụsụ, nzube na okwu ha na etu ha si emetụta mmetụta ha na-enwe banyere onwe ha yana okwu ha họpụtara na-emetụta ndị ọzọ.
Anyị na-enyere ụmụaka aka ịhụ na iwulite ụlọ bụ akụkụ dị mkpa nke ịbụ onye ndu. Buildingme ka akparamaagwa ghaa ime ihe di nma mgbe onweghi onye na ekiri ma họrọ itinye uche ya n’obi.
Are nwere mmụọ ịbụ akụkụ nke ọrụ a dị ịtụnanya?
Kpọtụrụ anyị iji chọpụta!